उफ ! मेरो ख्यालमा मात्र सिमित रहे मित्र ख्याल बहादुर – Gulmiews
उफ ! मेरो ख्यालमा मात्र सिमित रहे मित्र ख्याल बहादुर
१७ बैशाख २०७२, बिहीबार १३:०१ Sanju Kauchha
No comments	विष्णु घर्ती “भनभनेली” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी¸पाल्पा
“महाभूकम्पमा गुल्मीका चार जनाको मृत्यु एकको शव पाउन तीन महिना लाग्ने ।” गुल्मी न्यूजमा प्रेम सुनारमार्फत सम्प्रेषित समाचार १५ गते साझ ०८।४० मा पढें । अहिले मेरो कार्य क्षेत्र पाल्पा भएकोले यस क्षेत्रका भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरण तथा लगत संकलनजस्ता व्यवस्थापकीय कार्यहरुको समन्वय गरेपछि साझ सरर्र समाचारहरु हेर्दै जादा यस शीर्षकमा मेरा आँखा रोकिन पुगेका हुन् । उक्त चार जनामध्ये दुइ जना मेरै गाउँ भनभनेका हुन् । समाचार पुरै पढ्न अप्ठ्यारो लाग्दै गयो । शव पाउन तीन महिना लाग्ने वाक्यले अझ बढी मात्रामा घच्घचाइरह्यो । १२ बजे १२ गते आएको विनासकारी महाभुकम्पले घमीर भानुपोखराका मेरा अनन्य मित्र ख्याल बहादुर अर्यालको भैतिक ज्यान पनि रसुवाको पहाडले पुरिइरहेको छ । उनको शव पाउन तीन महिना लाग्ने बताइएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन गर्ने शिलशिलामा धेरै मित्रजनहररुसँग भेटघाट हुने गर्दछ । सबैसँग चिनजान हुदैन । भएका सबैसँग सम्झना रहदैन । सम्झना रहेकासँग स्मरणयेग्य मित्रता हुदैन । केही सिमित मित्रहरुसँगमात्र मित्रता कायम हुन्छ । ती मित्रहरुका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा सरसहयेग¸ सहभागिता र सामिप्यताकायम रहन्छ । यसै सीमाभित्र समेटिन सकेका मेरो नजिकका एक मित्र ख्याल बहादुर अर्याल पनि हुन् ।उहाँसँगका मित्रताका केही स्मरणीय क्षणहरूः
करिव ६।७ वर्ष पहिले उनी निजामती सेवामा प्रवेश गरी जिविस गुल्मी अन्तरगत कार्यक्षेत्र बनाइ अउदा त्यहीनेर मेरो भेटघाट र चिनजान समेत भएको हो । उहाँको कार्यसम्पादनको क्षेत्र तथा जिम्वारीमा सक्दो सहयोग र सरसल्लाह गाविस सचिव हकहीत संरक्षण केन्द्र सचिवको संस्थागत हैसियत एवम् व्यक्तिगत रूपमा गरियो भन्ने स्मरण अहिले ताजा भएर आएको छ । करिव आधा वर्षको बसाइपश्चात गुल्मीबाट सरुवा भइ जानु भयो ।
उहाँ निजामती किताबखानामा कार्यरत रहदा त्यहाँ गर्नु पर्ने कामहरु सरल र सहज ढंगबाट गरिरहनु भएको थियो । मेरो र साथीहरुको कामको सम्पादन गरिदिएको क्षण प्रातः स्मरणीय बनिरहेको छ । उहाँ नभदिएको भए एकै पटकमा फत्ते हुनेमा विश्वास त्यसबेला थिएन ।
सायद ०६९ फागुनतिर हुनुपर्दछ¸ उहाँको वैवाहिक कार्यक्रम तमघासबाट हुने तय भइसकेपछि आफैंले मलाइ काटमाडौंबाट फोन गरी निमन्त्रणा दिनु भयो । यस बखतमा म गुल्मीमा सप्रजिअ पदमा कार्यरत थिए । उक्त विवाहमा सरिक भइ सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना दिएँ ।
२०७१।१२।२५ देखि २८ गतेसम्म घमिर भानुपोखरामै केन्द्र बनाइ जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा एकीकृत घुम्ती शिविर टोलीको नेतृत्व मैले गरेको थिए । २५ गते घमीरमा उहाँकै घरमा पुगी झोला बिसाइएको थियो । जहाँ उहाका दाजु गोरख अर्यालको परिवार थियो । ४ दिनसम्मको कार्यसम्पादनका क्रममा मित्रताका नाताले भरपुर रुपमा सहयोग पाएँ ।
यही १६ गते विहानै घमीरका मेरा अर्का मित्र एवम् गाविस सचिव चिरञ्जीवी घिमिरे र टेक बहादुर विकसँग सम्पर्क गरी थप जानकारी लिए । घर परिवारको नम्बरमा सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन । चिरञ्जीवीले सुनाउनु भयो “यही ६ गते फोन गरी तपाइको समेत नाम लिएर कहाँ हुनुहुन्छ भनी सोधेका थिए ।” यस वाक्यले मलाइ अझ भावविह्वल तुल्याइरहेको छ ।
यस घडीमा सम्भवतः दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त हेस् भन्ने समवेदना प्रकट गर्दछु ।
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०१:५७	मिसन जिबी रोड “रातो लाईटको, कालो कहानी”...	१५ श्रावण २०७३, शनिबार १७:२८	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	दलित समुदायबाट सिडियो बनेका बिश्वकर्मा अमेरिकामा सम्मानित